MUQDISHO(P-TIMES) – Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waqtigan ku jira marxalad adag, waxaana hoggaanka u haysa dalka Itoobiya oo doonaysa in ay faragalin ku sameyso arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland, waxaana halista weyn ee wajahaysaa ay tahay magaceeda wixii lagu sameeyo waxyaabaha ka dhalan doona.
Dawladdaha taageera AMISOM, waxay muujiyeen kal hore walaaca ay ka qabaan in howlgalkan uu noqon waayey kii rasmiga ahaa, sidaas awgeedna waxay dalbadeen in ay shaqadoodu noqoto mid si rasmi ah ay uga howlgalaan Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada AMISOM oo u dhashay dalka Itoobiya ayaa hadda safar ku tagaya magaalada Kismaayo, oo ay ciidamada dalkiisu shalay ka sameyeen ficilo u muuqday kuwa aan ku jirin waajibaadka howlgalka ee Soomaaliya.
AMISOM, waxay isku aragtaa mid aan qeyb ka aheyn arrimaha siyaasadda gudaha, balse caqabadaha taagan ayaa ka dhigan in ay tahay halis weyn arrimaha ka socda Jubbooyinka oo noqon kara, kuwa howlgalkaba u duwa jiho aysan Soomaalidu isku raacsaneyn.
Dawladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ay saameyn ku yeelato arrimaha doorashooyinka Jubbaland, si ay taasi u hirgaliyaana waxay u marayaan ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah AMISOM, laakiin taasi ayaa dhaawacaysa hanaanka shaqo iyo kala amar-qaadashada taliska saree e howlgalkan.
Itobiya waxa lagu yaqan Qalafsananta maqatan wax amar ah,Amisoom kama qatan waxa laga warqaba xata midowga afrika shurcdisa dhag uma dhigan,Xata wadamada Yurub & mareykanka kama amar qataan.